Global Voices teny Malagasy » Chili: Ny takaitra navelan’ny horohorontanin’ny taona 1960 tany Valdivia · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 01 Marsa 2010 21:07 GMT 1	 · Mpanoratra Eduardo Avila Nandika Candy
Sokajy: Amerika Latina, Shily, Tantara, Vaovao Mafana, Voina
Dimampolo taona lasa izay no nisian'ny horohorotany lehibe indrindra voasoratra an-tantara, nanozongozona ny tanànan'i Valdivia any Chili . Ny 22 May 1960, tany akaikin'ny tanànan'i Cañete no nisy ny ivon'ilay horohorontany mirefy 9.5 hamafy . Na izany aza dia Valdivia no toerana tena voa mafy ka 40%-n'ny tranobeny no rava ary namela tsy manan-kialofana manodidina ny 20000 teo ho eo izany.
Mbola kely loatra ny maro tamin'ny mpampiasa haino aman-jerin'olom-pirenena ka tsy niaina ny horohorontanin'ny taona 1960, nefa ny sasany tahaka an'i Mauro Barrientos (@maurobarrientos) dia niresaka tamin'ny olona tany dimampolo taona lasa izay :
Niteny ny renibeko fa tsy afaka mampitaha iny horohorontany iny (2010) tamin'ny nisy tany Valdivia tamin'ny 1960 isika
Na izany na tsy izany, niraikitra tao an-dohan'ny maro manerana ny firenena ny takaitra navelan'iny horohorontany iny teo amin'ny tantaran'i Chili. Manoratra  Yondaime Andres (@EomerElessar):
Matahotra ny olona satria toa matoatoan'ny (horohorontanin'ny 19)60 ity (horohorontany ity).
Avy any amin'ny tanànan'i Valdivia, Betsabé Sandoval (@_Nahra) dia namoaka karazan-tsarin'ny fotoana samihafa tao amin'ny Twitpic  momba ny fahasimbàna nateraky ny horohorontanin'ny 1960, anisan'izany ity sary  mampiseho ny fahasimbàn'ny Katedralin'ny Valdivia Cathedral ity. Raha atambatra, nampiakatra sary 10 samihafa izy.
Sarin'i Valdivia taorian'ny horohorontany, nampiakarin'i _Nahra
Maro ny Mpampiasa Twitter monina any an-tanànan'i Valdivia amin'izao fotoana izao. Naneho ny heviny amin'ny fivoaran'ny horohorontanin'ny 2010 sy ny akon'izany teo amin'ireo mpiara-monina aminy izy ireo nandritra ny andro. Manoratra momba ny toetry ny tanàna amin'izao fotoana  ilay mpampiasa Twitter @tapeks :
Tsikaritra eny amin'ny vahoaka ny tahotra, hendratrendratra ampandehanana ny tsirairay, mampalahelo ny sisin-dàlana, tsy mahazatra no hita
Tamin'ny takarivan'ny alina voalohany taorian'ny horohorontany, i Evelyn Arriagada (@evelynarriaga)  sy i Daniela Contreras (@dcontrerasl)  dia samy nahatsikaritra fa somary mangingina ny manodidina, nefa samy mamonjy fandriana amin-tahotra kely ny tsirairay.
Na eo aza izany, tsy ny fahasimbàna nateraky ny horohorontany tamin'ny 1960 ihany no mijanona an'eritreritry ny maro, fa ny fihetsiky ny vahoaka Chiliana 50 taona lasa izay koa. Manoratra i  Pancho Ballesteros (@Pancho_B) :
Raha tafarintsika ny firenentsika taorian'ny (horohorontany) tany Valdivia 50 lasa izay, fotoana izao tokony hanaovana izany indray…
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/03/01/5156/
 Valdivia any Chili: http://en.wikipedia.org/wiki/Valdivia,_Chile
 horohorontany mirefy 9.5 hamafy: http://en.wikipedia.org/wiki/1960_Valdivia_earthquake
 niresaka tamin'ny olona tany dimampolo taona lasa izay: http://twitter.com/MauroBarrientos/statuses/9749098198
 namoaka karazan-tsarin'ny fotoana samihafa tao amin'ny Twitpic: http://twitpic.com/photos/_Nahra
 toetry ny tanàna amin'izao fotoana: http://twitter.com/tapeks/statuses/9750702080
 Evelyn Arriagada (@evelynarriaga): http://twitter.com/evelynarriagada/statuses/9751531570
 Daniela Contreras (@dcontrerasl): http://twitter.com/DContrerasL/statuses/9752175580
 Manoratra i: http://twitter.com/Pancho_B/statuses/9752442477